ခင်နှင်းယု (အမည်ရင်း မခင်စု) (၁၉၂၅-၂၀၀၃) သည် မြန်မာစာပေလောကတွင် ထင်ရှားသော အမျိုးသမီးကလောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည် ။
ဧရာဝတီတိုင်း ဝါးခယ်မမြို့၌ အဖ အစိုးရကျောင်းဆရာကြီး ဦးဘ ၊ အမိ ဒေါ်သိန်းတင်တို့မှ ၁၉၂၅ခု ၊ စက်တင်ဘာ ၇ ရက် (တနင်္လာနေ့) တွင်ဖွားမြင်သည် ။ မွေးချင်း ခုနစ်ယောက်အနက် ငါးယောက်မြောက်ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု နှင့်မောင်နှမ ဝမ်းကွဲတော်စပ် သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ။ ၁၉၅ဝ တွင် ဗိုလ်ကြီးကျော်သောင်းနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ကာ ၁၉၇ဝ တွင် ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်ခဲ့သည် ။ ၁၉၈၅ မှ ကျန်းမာရေးအလွန်ဆိုးရွားသောကြောင့် ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူ ပြီးနောက် "ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ" တွင် နေထိုင်ခဲ့သည် ။ ၂၀၀၃ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် (အင်္ဂါနေ့) နံနက် (၈:၃၀) တွင် ရန်ကုန်ပြည့်သူ့ ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သည်။
၁၉၃ဝ တွင် ဝါးခယ်မမြို့ ဦးဘိုးထင် မြန်မာစာသင် အလယ်တန်းကျောင်း၌ စတင်ပညာသင်ကြားသည် ။ ၁၉၄ဝ တွင် ဝါးခယ်မမြို့ ဦးဘိုကြီးမြန်မာစာ အထက်တန်းကျောင်း၌ ရှစ်တန်းမှ ဆယ်တန်းတိုင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး ၁၉၄၃ တွင် မြန်မာဆယ်တန်းနှင့် ၁၉၄၈ တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သည် ။ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း မှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ တွင် သက်ကြီးတက္ကသိုလ် ၊ ၁၉၅၉ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည် ။
၁၉၄၆ မှစကာ "မခင်စု" အမည်ရင်းဖြင့် ဖဆပလ သတင်းစဉ်တွင် ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၄၇-တွင် "အချို" ကလောင်အမည်ဖြင့် သတင်းစုံ ဂျာနယ်၌ ဝတ္ထုတိုများ ရေးသားခဲ့သည် ။ ခင်နှင်းယု ကလောင်အမည်ဖြင့် ပထမဆုံးရေးသောဝတ္ထုမှာ ၁၉၄၇ "စာပဒေသာမဂ္ဂဇင်း" တွင်ပါရှိသည့် "အရိုင်း" ဖြစ်သည်။ လုံးချင်းဝတ္ထု (၁၇) အုပ် ၊ မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည် အပုဒ် (၂၀) ၊ ဝတ္ထုတို (၁၀၀) ကျော်ခန့်ရေးသားခဲ့သည် ။ စာဆို၏ ဝတ္ထုတိုအချို့ကို ဂျာမန် ၊ ရုရှား ၊ ဂျပန် ဘာသာများသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သည် ။
ဘုံဓမ္မတာမှာ ကြုံလေသမှျ (၁၉၆၂)
ရွှေမျှား၊ ဒဂုန် ။ မြန်မာနိုင်ငံစာပေဆုများ
မလိခ ။ မြန်မာဝတ္ထုအညွှန်း (၂)
မလိခ ။ မြန်မာစာပေအဘိဓာန်
U Thaung (Aung Bala) (1981) ။"Contemporary Burmese Literature". Contributions to Asian Studies. 16: 81–99